Teo Ambohidrabiby, distrika Antananarivo Avaradrano no niseho
ny loza, araka ny fampitam-baovao ofisialin’ny zandary eo Ankadilalana. Môtô avy any Talatavolonondry
sy fiara no nifanehitra teo amin’ny PK 21 + 100. Teo amin’ny faritra an-kavian’ny fiara no nidofotra ilay kodiaran-droa ka naratra tamin’izany ilay mpitondra azy. Nentina nihazo ny fitsaboana sahaza azy teny amin’ny hopitalin’Anosiavaratra avy hatrany ilay tovolahy 28 taona izay mpanamory môtô naratra.Ny zandarimariam-pirenena ao Antanambao no nandray an-tanana ny fanadihadiana sy ny tohin’ny raharaha. Kely ny fahasimbana tamin’ilay fiara raha goavana izany ho an’ilay môtô ary tsy velona intsony ity kodiaran-droa ity, raha ny vaovao azo hatrany. Voalazan’ny mponina any an-toerana fa itrangana loza matetika amin’io faritra io noho ny hatsaran’ny lalana nefa be fiolahana. Araka ny feo nandeha ihany koa dia vokatry ny tsy fitandreman’ny mpamily roa tonta izay samy nandeha mafy ka ilay fiara nitaratra tamin’ny jiro matanjaka ka jambena ilay mpitondra môtô. Ny jiron’ity farany ihany koa anefa nanjavozavo.